Fahombiazan’ny filoha iray : Manana vady hendry hoe? -
AccueilRaharaham-pirenenaFahombiazan’ny filoha iray : Manana vady hendry hoe?
31/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Fahombiazan’ny filoham-pirenena iray: Miankina amin’ny fahendren’ny vadiny”. Io no lohantenin’ny gazety Tia Tanindrazana omaly ary nasiana ny sarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady.
Filoham-pirenena telo no nirodana tamin’ny alalan’ny hetsi-bahoaka teto: Philibert Tsiranana (1972), Didier Ratsiraka (1991-2002), Zafy Albert (1996) ary Marc Ravalomanana (2009). Midika izany fa tsy nahomby ireo fitondrana ireo, porofon’izany ny fahantrana mbola iainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana. Koa raha mandray io lahatsoratra miendrika faniratsirana ny filoham-pirenena navoakan’ny gazety Tia Tanindrazana ny alatsinainy 30 Oktobra io isika dia izao no fanontaniana mipetraka: “naditra ve izany Rtoa isany Justine Tsiranana, Céline Ratsiraka, Thérèse Zafy ary Lalao Ravalomanana matoa nirodana teo amin’ny fitondrana sy naaton’ny solombavambahoaka tamin’ny andraikitra maha filoham-pirenena azy ny vadin’izy efatra mirahavavy ireo?”.
Efa tsy mahita ho tenenina sy hanenjena ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina intsony ny hainoamanjerin’ny mpanohitra ka mirona any amin’ny fandikan-dalana tanteraka, heloka voatondron’ny lalàna mifehy ny Serasera, andininy faha-24. Tsy vitan’izany, fa henatra ho an’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety izany ary fihetsika tahaka izao nataon’ny Tia Tanindrazana izao mihitsy no manimba ity tontolon’ny asa fanavan-gazety ity. Lasa fampianarana fanamboarana baomba no asan’ny hainoamanjery nandritra iny Tetezamita, fanentanana hikomy ary famporisihana hamono sy handratra olona.
Apetraka amin’ny gazety Tia Tanindrazana mpanohana an’i Marc Ravalomanana io lahatsoratra navoakan’izy ireo omaly io: « maditra ve izany i Lalao Ravalomanana matoa bokan-trosa 20 miliara tsy nahaloa JIRAMA ny orinasa Tiko? Maditra ve izany i Lalao Ravalomanana matoa tsy nahalo hetra mitentina 600 miliara ny orinasan’izy mivady?”. Mora tokoa ny milaza izao zavatra rehetra izao, manaporofo indray fa tena malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara, kanefa tokony mba mijery fitaratra ihany mialohan’ny hanenjehana ny hafa. Ny fitondrana Philibert Tsiranana, Didier Ratsiraka, Zafy Albert ary indrindra ny an’i Marc Ravalomanana aloha no efa nibaribary teo imasom-bahoaka ny tsy fahombiazany ka nahatonga ireny hetsi-bahoaka nihafara tamin’ny fanonganam-panjakana ireny.